संसारलाई रुवाउने यो प्रेम काहानी, श्रीमानलाई र आफ्नी आमालाई अन्तिम म्यासेज यस्तो छोड्दै यी युवती सधैका लागि अस्ताईन (भिडियो) – Namaste Host
संसारलाई रुवाउने यो प्रेम काहानी, श्रीमानलाई र आफ्नी आमालाई अन्तिम म्यासेज यस्तो छोड्दै यी युवती सधैका लागि अस्ताईन (भिडियो)
March 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on संसारलाई रुवाउने यो प्रेम काहानी, श्रीमानलाई र आफ्नी आमालाई अन्तिम म्यासेज यस्तो छोड्दै यी युवती सधैका लागि अस्ताईन (भिडियो)
एजेन्सी । भारतको गुजरातमा रहेको अहमदाबादको नदीमा हा म फालेर ज्या न गुमाएकी आयशाको श्रीमानलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । उनका श्रीमानलाई भारतको राजस्थानबाट गि र फ् तार गरेको छ । आयशाले भिडियो बनाएर नदीमा हा म फा ल्नु अघि रेकर्ड गरिरहंदा उनको मुहारमा मुस्कान थियो । उनी मुस्कुराई रहेकी थिईन् । उनले बनाएको उक्त भिडियो नै उनको जिन्दगीको अन्तिम भिडियो थियो । जो सोशल मिडियामा निकै नै भाइरल पनि बन्यो ।
उनले चालेको उक्त कदमले धेरै मानिसहरुले उनको नीजी जिन्दगीको बारेमा जान्ने इच्छा राखे । मानिसहरुले उनको श्रीमानको बारेमा जान्ने उत्सुकता पनि देखाए । को हुन् त उनका श्रीमान ? के थियो कारण त्यस्तो कि आयशाले मुस्कुराउँदै भिडियो बनाउनु पर्ने ? र भिडियो बनाएरै नदीमा हाम फाल्नु पर्ने ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु जान्ने इच्छा सोशल मिडिया युजरसहरुले सोशल मिडियामा नै देखाए । आयशाका श्रीमान आरिफ आफ्नो बुवा बाबू खानको साथमा जालौरको एक ग्रेनाइट फैक्ट्रीमा काम गर्दा रहेछन् ।
उनले आफ्नो पुस्तैनी घरको बाहीर दुई वटा दोकानलाई पनि भाडामा दिएका रहेछन् । आरिफ ग्रेनाइट फैक्ट्रीमा सुपरभाइजरको पदमा रहेर काम गदर्थे । आयशालाई राजस्थानको जालौरसंग बालापनदेखि नै लगाव थियो । त्याहाँ उनको मामा घरपनि नजिकै थियो । त्यसै कारण पनि आयशालाई त्यो ठाउँसंग असाध्यै प्रेम र लगाव थियो । आयशाको मामाको भनाई अनुसार उनले आफ्नो श्रीमानलाई अत्ति नै धेरै माया गर्ने गर्थिन् । आयशालाई सानैबाट आईएएस बनने चाहाना थियो । उनी पढाईमा पनि निकै ने जेहेन्दार थिईन् ।
आयशाका ती सपनाहरुलाई उनका श्रीमान आरिफले भने पुरा गर्न दिएनन् । यही विषयलाई लिएर आयश र उनको श्रीमानको बीचमा झ गडा हुन शुरु गर्यो । त्यसै शिलशिलामा उनले आफ्नो श्रीमानको घर छाडेर आमा बुवाको घरमा बस्ना थालिन् । त्याहाँ बस्दा उनका बुवा आमाले उनलाई उनको इच्छा अनुसार जागिर गर्न भनेपछि उनले जागीर पनि गर्न थालिन् । आयशाले निजी बैंकमा काम गर्न शुरु गरिन् । माईतमा बसेर काम गर्दापनि आयशलाई उनका श्रीमानले सताएको हुनाले उनले यस्तो कदम चालेको उनका माईतीको भनाई छ ।
आयशाले नदीमा हा म फा ल्नु अघि आफ्नो श्रीमानलाई धेरै माया गर्ने बताएपनि वास्तविकता भने त्यो थिएन । छोरीको जिन्दगीको वास्तविकता बुझेका उनका आमाबुवाले भने आफ्नो छोरीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउनेलाई आफुहरुले कहिले पनि माफ नगर्ने बताएका छन् । बुवाआमाको भनाई अनुसार आयशालाई उनका श्रीमानले र घरका अन्य सदस्यहरुले दाईजो नल्याएको भन्दै या त ना दिने गरेका थिए । आयशालाई तीनदिनसम्म खाना खान नदिएको कुरा उनका आमाबुवाले प्रहरीलाई बताएका छन् । छोरीले यस्तो कदम चाल्नुमा ज्वाई र अरु घरपरिवार जिम्मेवार रहको बताएका छन् ।
प्रहरीले पाएको जानकारी अनुसार आयशाले नदीमा हाम फाल्नु अघि आफ्नो श्रीमानलाई फोन गरेर आफुले देहत्याग गर्न लागेको बताएकी थिईन् । आयशाले नदीमा हा म फा ल्दैछिन् भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि आयशलाई बचाउन आएनन् उनका श्रीमान आरिफ । सबै कुरा थाहा पाएका श्रीमानले आयशालाई चाहेको भए बचाउन सक्थे भन्दै प्रहरीले उनलाई गि र फ्ता र गरेको छ । श्रीमानलाई खबर गरेको केही समयमा नै आयशाले भिडियो बनाएर नदीमा हाम फालेकी थिईन् ।
५९ दिनमा यस्तो भए कन्चन,अवस्था झनझन नाजुक अनि गम्भीर (भिडियो हेर्नुस्)
विश्व शान्तिको कामनासहित प्रधानमन्त्रीले गरे पशुपतिनाथमा विशेष पूजा (फोटोफिचर)
नवीन्द्रराज जोशीको निधन पछि छोरीले भक्कानो छोडी रुदै अग्नालो हाली भनिन्, ‘बाबा आइलभ यु’ उठ्नुस न प्लिज (भिडियो)
काठमाडौंमा बढ्न थाल्यो कोरोना।आयो यस्तो डरलाग्दो समाचार